Lozam-pifamoivoizana nahatsiravina: kamiao nivarina tanaty hantsana, 6 namoy ny ainy, maro no naratra | NewsMada
Niendaka ny kodiarana aloha iray, nivadibadika tanaty hantsana avy eo. Izay no nahatonga ity lozam-pifamoivoizana nahatsiravina, nitranga tao amin’ny fokontany Tsiakato, distrikan’i Manandriana, ny alin’ny asabotsy teo ity. Dimy tamin’ireo mpandeha no maty tsy tra-drano, raha namoy ny ainy teny an-dalana ho any amin’ny hopitaly kosa ny iray, ankoatra ireo naratra mafy.
Tafakatra enina no isan’ireo namoy ny ainy nandritra ny lozam-pifamoivoizana izay niseho teo Tsiakato andrefana, kaominina Ambatomarina-distrikan’Amoron’i Mania, ny asabotsy hariva teo manodidina ny tamin’ny fito ora latsaka fahefany. Araka ny fantatra, kamiao lehibe iray mpitaitra vary niaraka tamin’ny tompon’entana avy any Ambondromisotra ho any Ambositra no nivadika vokatry ny fialan’ny kodiarana havia iray teo aloha tamin’ny vatan’ny kamiao. Vokany, latsaka tao anaty hantsana nanamorona ny arabe, teo ankavian-dalana ilay fiara ka nivadika ambony ambany mihitsy nandrita ny loza. Namoy ny ainy teo no ho eo tamin’izany ny olona miisa dimy tamin’ireo mpandeha 16 tao anatin’ny fiara. Fito tamin’izy ireo kosa naratra raha voa mafy tamin’izany ny mpandeha iray, telo tamin‘ireo olona kosa no voamarina fa tsy naninona tao anatin’ilay kamiao, hoy ny loharanom-baovao. Nambaran’ny kaomandin’ny vondron’ny zandarimaria ao Amoron’i Mania fa nalefa teny amin’ny hopitalin’i Volafotsy-Ambositra avy hatrany irao niharam-boina tao anatin’io kamiao be io. Ny iray tamin’izy ireo kosa, hoy izy, namoy ny ainy teny an-dalana vokatry ny voina nahazo azy.
Taorian’ny nahatongavan’ireo zandarin’i Manandriana teo an-toerana mpanao fanadihadiana, narovan’ny zandarin’Ambatomarina avy hatrany ireo enta-mavesatra noentin’ny fiara. Ireo razana ihany koa mbola teo ambany fiahian’’ireo zandary mialohan’ny hanolorana azy amin’ireo mpiandraikitra azy sy ny fianakaviana.
Araka ny fantatra, teo anelanelan’ny lalam-pirenena faha-35 mampitohy an’Ivato Centre sy Malaimbandy-Ambatondraboka no nisehoan’ny loza. Teo amin’ny 10 metatra tsy hiditra ny lalam-pirenena no namotsotra ny kodiarana. Misokatra ny fanadihadiana.